Inombolo kamazisi yemoto - Wikipedia
Inombolo yokuhlonza imoto (i-VIN) iyikhodi ehlukile, kufaka phakathi inombolo ye-serial, esetshenziswa ngumkhakha wezimoto ukukhomba izimoto ngazinye, izimoto ezihuduliwe, izithuthuthu, izithuthuthu kanye ne-mopeed, njengoba kuchazwe ku-ISO 3779 (okuqukethwe nesakhiwo) naku-ISO 4030 (indawo nokunamathiselwe).
Ama-VIN asetshenziswa okokuqala ngo-1954 e-United States.  Kusukela ngo-1954 kuya ku-1981, yayingekho indinganiso eyamukelekayo kulezi zinombolo, ngakho abakhiqizi abahlukile basebenzise amafomethi ahlukile.
Ngo-1954, ngesicelo sikahulumeni wase-US, abakhiqizi bezimoto baseMelika kanye neNhlangano Yezimoto Abakhiqizi babamba iqhaza ekwakhiweni kohlelo olusha lokumaka izinombolo olwalubizwa ngokuthi yi-Vehicle Idicationication Number (VIN) ngenqubo yokuvumelana eyatholakala futhi yafihlwa umaki we-chassis wale VIN. Kuze kube yileso sikhathi, amazwe abesebenzisa inombolo yenjini ukubhalisa nokubeka izimoto nezinqola namaloli okuye kwaba yinkinga uma ngabe injini ithathelwa indawo eyayivamile ngaleso sikhathi.
Ngo-1981, iNational Highway Traic Safety Administration yase-United States yalinganisa ifomethi.  Bekudinga ukuthi zonke izimoto ezisendleleni zithengiswe ukuthi zibe ne-VIN enezinhlamvu eziyi-17, ezingafaki izinhlamvu O (o), I (i), no-Q (q) (ukugwema ukudideka ngezinombolo 0, 1, no-9) .
Kunezinsizakalo zomlando wezimoto emazweni ambalwa ezisiza abanikazi bezimoto abangahle basebenzise ama-VIN ukuthola izimoto ezingenasici noma ezibhaliwe.
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Inombolo_kamazisi_yemoto&oldid=72028" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-25 uMasingana 2021, nge-06:35.